UKUBULALA UEVA WESIZINI 3, 4 UNXIBELELWANO NOLOTE SUSPENSE, ENTSHA [CAST], ULINDELO OLUNOMDLA KUNYE NAMATHUBA AMANGALISAYO - IINKQUBO ZETV
Akuzange kubekho nasiphi na isikrokro sokuba ukubulala uEva kuya kwenza ukubuyela kwisizini yesithathu. I-spy thriller yasebenza ngokumangalisayo ngokumangalisayo
Akuzange kubekho sikrokrela ukuba Ukubulala uEva ingabuyela kwixesha lesithathu. I-spy thriller isebenze ngokumangalisa kakhulu e-UK nakwihlabathi lonke, kwaye ukulinganisa, njengoko siyazi ngokupheleleyo, kukumkani. Okanye ngenene ukumkanikazi.Kwaye, ubuncinci singahoyi, bekukho lawa weentaba kwisiphelo sexesha lesibini, ebinabalandeli balo mboniso bekhala ngeempendulo.
Ulwaphulo-mthetho oludumileyo lwe-BBC lufumana elinye ixesha lonyaka.
Ukubulala uEva kwavuselelwa elinye ixesha ngo-Epreli 2019, ngaphambi kokuba ixesha lesibini lize nelokuqala e-UK.
Ixesha lesibini liphele nge-cliffhanger eyothusayo. Isiphelo sikaEva Polastri siyimfihlakalo. Emva kokuleqana kulo lonke ixesha lonyaka, uthotho lweengqungquthela phakathi kwamabhodlo ase-Italiya. Umbulali uVillanelle udubula uEva ngasemva kwinto ayithandayo.
Kudliwanondlebe nephephancwadi iPorter, umlingisi waseKhanada-waseKorea uSandra Oh, odlala uEva Polastri, uqinisekisile ukuba uEva akafanga. Ukwanike nabonakalisi malunga nokuba leliphi ixesha le-3 eliza kuba malunga nalo; Umdlali weqonga uthi kuyakuba malunga noEva ukuzama ukumelana nemvakalelo yeziganeko ezenzeke kwisizini ephelileyo.
Yintoni umlingisi wexesha elizayo?
Ukusukela oko uSandra Oh iqinisekisile ukuba oyithandayo Iarhente ye-MI5 ayifanga, izakuqhubeka nenxaxheba yayo njengo-Eve Polastri. UJodie Comer uya kuthi, ewe, aqhubeke nendima yakhe njengombulali wengqondo uVillanelle. UFiona Shaw uya kubuya njengoCarolyn Martens noKim Bodnia njengoKonstantin. U-Owen McDonnell uzakubuya njengo-Niko Polastri, u-Sean Delaney njengo-Kenny Stoughton, no-Nina Sosanya njengo-Jess.
Umyili weSizini 1 kunye nombhali uPhoebe Waller-Bridge uxelwe ukuba azibhalele umlinganiswa oza kumveza kwisizini ezayo. Kwincoko yakhe noMirror, umbhali ophumelele iBafta uthi umenzela iyelenqe lokufa ngo-007 ngezandla zikaVillanelle.
Ngaba ukhona umbhali omtsha wolu ngcelele?
Ukulandela isithethe sokubhala ngokutsha rhoqo ngexesha lonyaka, ixesha lesithathu lokubulala uEva liza kuba nombhali omtsha.
UPhoebe Waller-Bridge ubhale isizini yokuqala, othe emva koko wadlulisela ulutya ku-Emerald Fennell weSizini 2. USuzanne Heathcote uya kuba ngumbhali wesizini ezayo.
UWaller-Bridge noFennell bonwabile ukubona into eyenziwa nguHeathcote ngabalinganiswa. UHeathcote ngumdali woyika u-Dead Walking Dead 3.
Liza kukhululwa nini ixesha?
Akukho umhla wokukhutshwa ngokusesikweni wexesha elitsha okwangoku. Ngokwemithombo, sinokubona isiqendu sokuqala sexesha lesithathu ngo-Epreli 2020.
akukho mdlalo akukho mkhondo wobomi
Ewe, masilinde ukuba umboniso ufike kungekudala. Ukuza kuthi ga ngoku uhlale ukhuselekile kwaye uvakala ngaphakathi kwiindonga, kude nobhubhane, ubukele iinkqubo zakho ozithandayo.
Ukufunyanwa kwamaGqwirha exesha lesi-2 iiNdawo eziQhelekileyo zeFani ekufuneka ujonge kuzo
Abaphindezeli beMarvel 'HOT TO TROT' Eyona nto ibalaseleyo kwi-Ant-Man kunye ne-Iron Man Brew Gameplay
Ngaba iTransformers 7 irhoxisiwe yiParamount ??? Kuya kufuneka Uzazi Izizathu
Ngaba kuya kubakho isizini 5 yomlambo
eli lixesha lonyaka we-zombie 3 wokukhutshwa
anne nge e 2021
umtyholi sisiqendu sexesha lesigaba
Iintsuku ezingama-365 inxalenye 2 yetreyila